काठमाडौंका नचल्ने ट्राफिक लाइटले ‘स्मार्ट सिटी’को नारालाई गिज्याइरहेको छ ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौंका नचल्ने ट्राफिक लाइटले ‘स्मार्ट सिटी’को नारालाई गिज्याइरहेको छ !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको २३ ठाउँमा ट्राफिक लाइट छ । तर, अधिकांश चल्दैनन् । भएका जेब्राक्रसिङ पनि मेटिएका छन् । जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ । लाइट भएको ठाउँमा समेत प्रहरीले हातको इशारामा सवारी व्यवस्थापन गरिरहेको दृश्यले ‘स्मार्ट सिटी’को नारालाई गिज्याए झैं लाग्छ ।
सडक व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ट्राफिक लाइट मर्मतको लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च ग-यो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नयाँ जडान तथा मर्मतका लागि १ करोड खर्च भयो । तर, काठमाडौं उपत्यकामा जडित अधिकांश लाईटले अहिले काम गर्दैन ।
काठमाडौंको थापाथली, त्रिपुरेशवर, कालीमाटी, सिंहदरबार, घण्टाघर लगायतका क्षेत्रमा ट्राफिक लाइटको अस्तित्व छ । तर, यि ठाउँमा प्रहरीको इशाराले नै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छन् । एकातिर ट्राफिक लाइट छैन, अर्कातिर भएको जेब्राकस पनि मेटिदा सडक वारपार गर्न यात्रुलाई हम्मे–हम्मे पर्छ । जेब्रा क्रसिङ स्पष्ट नदेखिदा दुर्घटनाको संभावना पनि उच्च छ ।
स्पष्ट नदेखिने जेब्राक्रसिङका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । जसको मार ट्राफिक प्रहरीले मात्र होइन पैदल यात्रु र सवारी चालकले पनि खेपिरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको मुख्य सडकका ४ सय २४ स्थानमा जेब्राक्रसिङ छ । ट्राफिक लाइट र जेब्राक्रसिङको अभावमा यात्रुले कहिलेसम्म त्रास खेपिरहनु पर्ने हो भन्ने जवाफ न प्रहरीसँग छ, न विभागसँग ।